Roborock's Onyx Dump Station na-eme ka ọ dị mfe karị [Nyochaa] | Akụrụngwa Akụkọ
Roborock's Onyx Dump Station na-eme ka ọ dị mfe [Nyochaa]
Miguel Hernandez | 15/07/2021 14:00 | Emelitere ka 17/07/2021 13:24 | Automlọ akpaaka, Ngwa, Home, Nyocha
Anyị na-adịbeghị anya nyochaa ebe a na- Roborock S7, onye na-ehicha ihe na robot nke na-ehicha ma na-enye nsonaazụ dị egwu. Ka ọ dị ugbu a, uru kachasị mma maka agụụ robot ego anyị enyochala na chanel. Agbanyeghị, oke oke zuru oke maka obere nkọwa, ụlọ ọrụ na-ewepụta onwe ha dịwanye mkpa.
Roborock ewebatala ebe ọzọ na-ewepu onwe ya ma anyị enyochaa ya nke ọma ka ị lelee mgbakwunye mgbakwunye Roborock S7 a. Chọpụta anyị otu esi edozigharị ihe nhicha dọkụ ala gị dịkarịa ala ma ị nwere ike iji oge ahụ ị na-egbughị ịfufu ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụ nke ukwu Ikiri ụkwụ Achilles nke ụdị ngwaọrụ a, mgbe ị ga-atọgbọ ha. The nkwụnye ego na-enye maka ihe ọ na-enye, na mgbe i nwere anu ulo (dị ka m ikpe) ọ na-enye kpọmkwem maka a di na nwunye nke cleanings na kasị. Ya mere, oge ọ bụla m chọrọ ịmegharị Roborock S7 m, m ga-echeta ma m bupụrụ ya. Nke a ga - abụzi nsogbu na - enweghị nsogbu n'ihi ngwaọrụ a anyị na - anwale, ebe a na-ewepu onwe ya na Roborock emegharịwo ka ọ bụrụ onye na-ehicha ihe kachasị elu na nke ahụ na-aghọ otu n'ime ndị ya na ya kacha mma.
1 Akụrụngwa na imewe: borodị Roborock
2 Usoro mkpofu ahihia na uzuzu
3 Na smart njikọ
4 Ahụmahụ onye ọrụ
Akụrụngwa na imewe: borodị Roborock
Ebe nchekwa onwe nke Roborock S7, kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, na - abata na agba abụọ, ojii na ọcha, dabara na agba nke igwe mkpofu robot gị. O nwere ọkọlọtọ ma nwetụgogo elu, n'otu ụzọ ahụ na ọ nwere sistemụ silinda abụọ nke na-etinye tank na moto moto. Maka ndị ọzọ, n'ọdụ ụgbọ mmiri a na-arụ ọrụ otu ọrụ ahụ dị ka ebe a na-akwụ ụgwọ, ya bụ, ọ nwere ike ijikọ robot gị n'ike iji gaa n'ihu na ịkwanye ngwaọrụ ahụ.
Ibu ibu: 5,5 kilogram
Akụkụ: 31.4 x 45.7 x 38.3 cm
Dị na agba: Nwa na ọcha
Ọ nwere eriri ihe na azụ, nke mere na ị nwere ike idowe ya edoghi anya ọ bụla ọnọdụ, ihe nnọọ nnabata. Na akụkụ dị ala o nwere ụfọdụ ike nke na-enyere aka ịrịgo ngwaọrụ ahụ na obere rọk ahụ, n'otu ụzọ ahụ ọ na-ewe uru iji kpochapụ mkpọ na-acha ọkụ na otu ụdị brushes nke etinyere maka nzube a. O doro anya na anyị ga-adị mfe metụtara ya ika ruru ya akụkụ na imewe, n'ihi ya, ọ n'ụzọ zuru ezu ọkụ na ihe ị ga-atụ anya n'aka a Roborock S7 enyi.
Usoro mkpofu ahihia na uzuzu
Akụkụ mbụ a dị ezigbo mkpa, n'eziokwu ọ dị m ka nke kachasị mkpa na ọ bụ ya mere o ji bụrụ oge iji kwuo okwu n'ogologo banyere ya. Maraworị na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọdụ ụgbọ ala ndị na-akpaghị aka na-achọ usoro nke "akpa" nke na-enwekarị atụmatụ ahịa, ma na-enweghị ha ha enweghị nnukwu uru. Otú ọ dị, ebe a na-efu onwe ya nke Roborock S7 na-enye gị ohere usoro abụọ iji wepụ na ịchekwa unyi:
Na tankị hermetic site na usoro mmiri cyclonic
Ke «ájá catcher» akpa
Irè, Ma ma ọ bụ iji iji Roborock S7 tank akpa bụ nhọrọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na akpa a ka emepụtara ya maka uzuzu ma nye anyị ohere ịzacha ọdụ na-ewepụghị tank ahụ, ọ bụghị ihe dị mkpa.
Akpa uzuzu nwere ikike nke 1,8 lita ọ na-akàrà na akpaghị aka. Anyị na-etinye ya na ọnọdụ elu site na iji kaadiboodu na-eduzi ya ma wepụ ya na nke dị ala mgbe ị na-emechi akara. Akpa a nwere ọgwụgwọ antibacterial iji hụ na gburugburu ebe obibi dị ọcha.
Ewezuga nke a, ị nwere ike ịga ozugbo maka imepụta multi-cyclone (ya na ihe iri na ise) jiri otutu oso nke ga - enye gi ohere iwepu tank Roborock S15 ngwa ngwa. Anyị nwere ikike anọ dabere na mkpọtụ na ike oriri anyị kwuru:
Ana m akwado ihe kachasị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mkpọtụ ahụ nwere ike ịrị elu karịa nkịtị, ebe a ihe dị mkpa bụ ịtọhapụ robot ahụ n'ụzọ ziri ezi, nke ahụ bụ ihe ọ na-eme. Osimiri a nwere nzacha ọkọlọtọ na nzacha abụọ ọzọ nke na-eme ka akara zuru oke ka uzuzu ghara ịgbapụ. Ọ na-aga n'ekwughị na a ga-ewepụ niile nzacha ndị a ma nwee ike ihicha ya n'ụzọ dị mfe n'okpuru mgbata, ọ bụ ezie na ule anyị adịbeghị ogologo oge ka ọ dị anya. Ọ bụrụ na anyị họrọ ịpụfu ihe site na sistemụ na-arụ ọtụtụ silinda, anyị ga-enwe tankị lita 1,5, dịtụ obere karịa nke akpa na-adọta uzuzu.
Ike tankị dị ihe dị ka izu anọ
Nchikota nke teknụzụ ndị a niile na-eme ka ọ bụrụ ngwaọrụ pụrụ iche, ebe ọ bụ na enweghị usoro ihe mkpofu robot ọzọ nke na-enye ohere iji akpa na tankị tozuru etozu. Maka ihe a niile, na-eburu n'uche ihe ndị dị n'elu, ọ natala asambodo dị iche iche na TÜV Rheinland banyere mmelite nke ọnọdụ obibi ndụ nke ndị na-arịa ọrịa nfụkasị ahụ.
Na smart njikọ
Kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ọdụ nnwere onwe nke Roborock S7 jikọtara ya na ngwa Roborock n'otu okwu ahụ dịka igwe nhicha robot. Na tiori, ọ na - ewe uru nke algorithm nke emepụtara iji mezie ihe efu maka ihe nhicha nke onye ọrụ, mana achọpụtabeghị m nnukwu ọdịiche. Anyị nwere ike ijikwa usoro ahụ na ike nke ịtọgbọ nkịtị na ngwa ahụ na-etinyekọta nke ọma, ọ bụ eziokwu na anyị anaghị agbaghara ọrụ ndị ọzọ.
Dị ka mere n'oge ahụ na Roborock S7, ahụmịhe ọhụụ ọdụ ụgbọ-ala ọzọ na-enye m adịla ezigbo mma. Onwe m, m na-ahọrọ sistemụ ikuku cyclonic na tank iji zere imepụta unyi karịa na akpa ahụ na iji belata mmezi, agbanyeghị, ọ na-eme ka ọ dị mfe wepu unyi site na iji akpa gị ejiri akara nke ọma.
Theno ne ade a na ɛwɔ robot mu a ɛma w’ani gye paa ihe dị ka euro 299, enwere ike ịzụta ya site ugbu a na Geekbuying, ọ bụ ezie na a na-atụ anya iru isi ihe ire ere n'oge na-adịghị anya. Ma ọ bara uru itinye ego iji zere ịtọgbọ mgbe niile, ana m ahapụ ya n'aka gị.
Roborock S7 onwe-efu
Ihe na: 15 2021 XNUMX
Mgbanwe ikpeazụ: 17 2021 XNUMX
Multifunction na akpa ma ọ bụ tank
Mfe ntọala dị mma
Njikọta na nhazi
Noise nwere ike ịkarị akarị
Ogo ya buru ibu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Roborock's Onyx Dump Station na-eme ka ọ dị mfe [Nyochaa]
Igwe onyonyo onyonyo nwere nchedo 360